Vaovao - Famakafakana momba ny toe-javatra import sy export an'ny indostrian'ny fitafiana sinoa amin'ny taona 2020
Fanadihadiana momba ny toe-javatra import sy export an'ny indostrian'ny fitafiana any Shina amin'ny taona 2020
Amin'ny maha-firenena mpanondrana akanjo lehibe azy, ny sandan'ny fanondranana akanjo isan-taona any Chine dia mihoatra ny 100 miliara dolara amerikana, izay lehibe lavitra noho ny sandan'ny sandan'ny akanjo. Saingy, niaraka tamin'ny fanovana ny firafitra ara-toekaren'i Shina tato anatin'ny taona vitsivitsy, nividy tsikelikely tao anatin'ny vanim-potoana matotra ny indostrian'ny fitafiana, ary nihanatombo tsikelikely ny karazan-tsarimihetsika, miha-mihena ny entana ampidirina sy manondrana entana any Shina. Tamin'ny taona 2018, 157,812 miliara dolara amerikana ny sandan'ny fanondranana ny akanjo sy kojakoj'i Sina, ary 8 261 miliara dolara amerikana ny sandan'ny entana.
Firenena lehibe mpanondrana akanjo i Shina, saingy mihena tsikelikely ny ambim-bavany amin'ny import sy export
Amin'ny maha-firenena mpanondrana akanjo lehibe azy, ny sandan'ny fanondranana akanjo isan-taona any Chine dia mihoatra ny 100 miliara dolara amerikana, izay lehibe lavitra noho ny sandan'ny sandan'ny akanjo. Na izany aza, niaraka tamin'ny fanovana ny firafitra ara-toekaren'i Shina tato anatin'ny taona vitsivitsy, niditra tao anatin'ny vanim-potoana matotra ny indostrian'ny akanjo. Rehefa avy nampiroborobo tsikelikely ny vokatra isan-karazany dia miha mihena tsikelikely ny fanafarana akanjo sy ny fanondranan'i Sina.
Nanomboka tamin'ny 2014 ka hatramin'ny 2020, nihena tsikelikely ny haben'ny fanondranana akanjo any Shina. Raha ny statistikan'ny Administratera jeneralin'ny fadin-tseranana, tamin'ny taona 2018, ny haben'ny fanondranana ny fitafiana sy ny kojakojako an'i Chine dia 157,812 miliara dolara amerikana (novaina tamin'ny taha-taha ny dolara amerikana lasa RMB), isan-taona fihenan'ny 0,68%; ny volana janoary ka hatramin'ny mey 2020, ny sandan'ny fanondranana ny fitafiana sy kojakoja sinoa dia US $ 51.429 miliara, fihenan'ny 7,28% isan-taona.
Nanomboka tamin'ny 2014 ka hatramin'ny 2020, ny haben'ny fanafarana akanjo any Sina dia nitombo haingana. Raha ny antontan'isa momba ny fitantanan-draharaha ankapobeny momba ny ladoany, tamin'ny taona 2018, ny sandan'ny sandan'ny fitafiana sy fitafiana sinoa dia 8,261 miliara dolara amerikana, fitomboana 14,80%; nanomboka ny volana janoary ka hatramin'ny aprily 2020, ny haben'ny fanafarana fitafiana sinoa sy fitafiana sinoa dia 2,715 miliara dolara amerikana, miaraka amin'ny fisondrotana 11,41% isan-taona.
Ny tanjon'ny orinasa mpanondrana akanjo any Shina dia ny Vondrona eropeana, Etazonia, ASEAN ary Japon. Tamin'ny taona 2018 dia nahatratra 33,343 tapitrisa dolara amerikana ny entana natondran'i Shina tany amin'ny UE, narahin'i Etazonia sy Japon, miaraka amintsika 32,153 miliara dolara sy US $ 15,539 miliara. Fehikibo iray, làlambe iray, no faritra lehibe indrindra fanondranana. Ny fironana tato anatin'ny taona vitsivitsy dia ny fanondranana akanjo any Shina any Etazonia sy Japon dia nanohy fitomboana, nanenjana ny fihenan'ny fanondranana any ivelany, ary nampitombo ny haben'ny fanondranan'ny firenena sasany manamorona ny fehikibo sy ny arabe. Tamin'ny taona 2018, nitombo maherin'ny 40% ny fanondranan'i Shina tany Vietnam sy Myanmar, raha 11,17% kosa ny 4,3%, 4,38% ary 0,79%.